कुनै बेलाको ब्यापारिक केन्द्र कटाक्षे हाटबजार अस्तित्व हराउदै – हाम्रो समाधान
टीकापुर १३ फागुन /
कुनै बेला कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. ९ को कटाक्षे बजारको उत्साह बेग्लै थियो । पहाडी जिल्ला अछाम, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला लगायतका ठाउँहरुबाट मानिसहरु हाट लिनका लागि त्यही कटाक्षे बजार पुग्ने गरेका थिए । त्यो बेलाको हाट ल्याउने कुरा निकै शाहसी पनि मानिन्थ्यो । कटाक्षेबाट सामान लिएर अछाममा ब्यापार गरिन्थ्यो । जुम्लामा कटाक्षेकै नुन पुग्थ्यो ।
त्यो पनि सयौं किलोमीटरको पैदल यात्रा, हप्तादिन लगाएर पिठ्युँमा सामानको भारी बोक्नु पर्ने, जंगलमा बाँस बस्नुपर्ने, त्यही जंगलमै खाना खानु पर्ने जस्तो कस्टकर यात्राको बारेमा अहिलेको पुस्तालाई सुनाए कहानी जस्तो लाग्ने गरेको भक्तप्रसाद खनाल बताउनुहुन्छ । ” मैले राजापुर कटाक्षेबाट धेरै पटक हाट लाएको छु । त्यहाबाट सामान ल्याएर अछाममा ब्यापार गरिन्थ्यो ।” खनालले भन्नुभयो, ” अहिलेकालाई त्यो कुरा सुनाउदा कहानी सुनाए जस्तो लाग्छ । उहाँले गाउँभरिका मानिसहरु एकैपटक हाट ल्याउन जादा रमाइलो पनि हुने र बाटो कटेको पनि थाहै नभई हाट ल्याएर घर पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
अहिले पनि बुढापाकाहरु कटाक्षे, राजापुरको हाट बोकेको कुरा सुनाउँदा अहिलेको पुस्तालाई कहानीजस्तो लाग्ने गरेको छ । पहाडी जिल्लाबाट एक हप्ताभन्दा लामो पैदल यात्रासहित मानिसहरु कटाक्षे बजार पुग्ने गर्थे । त्यतिबेला कटाक्षे बजारको मुहार चम्किलो ताराजस्तै भएको २०२९ सालदेखि बस्दै आएका स्थानीय दलबहादुर रावल बताउनुहुन्छ । उहाँले २०३२ सालमा समिति गठन भई बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भन्दै बजार बसेको भए पनि २०५० साल नपुग्दै बजार तितर–वितर भएको बताउनुभयो ।
“कटाक्षे बजारको अवस्था यस्तो होला भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । दैनिक त्यो बेलाकै लाखौंको व्यापार कटाक्षेमा हुन्थ्यो ।’ रावलले भन्नुभयो, “बजारभरि पहाडबाट ल्याएको घ्यूको सुगन्ध आउँथ्यो । मान्छेको भिडभाड मात्र देखिन्थ्यो । कटाक्षेबाट हटेरुहरुले नून, मट्टितेल, फलाम लगाएतका सामानहरु लिएर जाने गर्थे ।”
उहाँले कैलालीको पुर्बी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश ब्यापारीहरुलाई कटाक्षे बजारले नै स्थापित गरेको बताउनुभयो । “अहिले बजार उजाड भइसकेको छ । एक÷दुई पसलबाहेक केही छैन ।” रावलले भन्नुभयो, “अहिले बजार टुहुरो बनेको छ । कटाक्षेबाट ब्यापारीले चाहिने जति पैसा कामाए । अहिले कटाक्षे बिर्सेर गए ।”
त्यतिबेला कटाक्षे बजारमा एक हजार भन्दा बढी पसलहरु रहेको स्थानीय बताउछन । दश भन्दा बढी गल्लीमा पसल थिए । बजार क्षेत्रमा मानिसहरुको चहलपहल हुन्थ्यो भने छेउछाउमा जुम्लीहरुका भेडाहरुको बथान हुने गरेको स्थानीय व्यापारी रञ्जन थापा बताउनुहुन्छ । जुम्ला, कालिकोट लगाएतका जिल्लाबाट सामान ढुवानीका लागि जुम्लीले भेडाको प्रयोग गर्थे । छेउछाउका जंगलहरु सेता भेडाले सेतामय हुन्थे । २०२८ सालमा अछामको दर्नाबाट बसाइ सरी कटाक्षे पुग्नुभएका थापाको परिवारले त्यहाँ होटल व्यवसाय सुरु गरेको बताउनुभयो। ” हामी पनि ब्यापार गर्ने उदेश्यले कटाक्षे आएका थियौ । पैसा पनि कमाइयो तर लगानी पनि यतै गरियो ।” थापाले भन्नुभयो , ” अहिले चाहेर पनि छोडेर जाने अबस्था छैन । जे जति सम्पत्ति जोडियो कटाक्षेमै जोडियो । अहिले बिक्री गर्न चाहेर पनि बिक्री हुने अवस्था छैन ।”
कटाक्षे बजार स्थापनाका लागि तत्कालीन समयमा टीकाराम भाट, गगनसिंह थापा, रङ्गनाथ ढकाल, टेकबहादुर थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्थानीय बताउछन् । सानासाना बजारहरुलाई एकैठाउमा ल्याएर कटाक्षे बजार बनेको थियो । पुर्ब पश्चिम राजमार्ग बनी नसकेको बेला लटाक्षेको भबिस्य सबैले उज्ज्वल देखेका थिए । कर्णाली चिसापानीमा पुल निर्माण बनेपछि कटाक्षेका ब्यापारीहरु राजमार्ग केन्द्रित हुन थाले । कटाक्षे बजार सबैका लागि बिरानो लाग्न थाले पछी अहिले बजार उजाडिन पुगेको स्थानिय गंगाराम भाट बताउनुहुन्छ ।
“पहिले मानिसहरुको आवागमनको चापले एकातर्फ चोरी, डकैतीको त्रास बढाउँथ्यो भने अहिले आँगनसँगै जङ्गल जोडिँदा जङ्गली जनावरको त्रास बढ्नै गएको छ ।” भाटले भन्नुभयो, “अझै पनि विकास भयो भने कटाक्षेको मुहार फेरिन्छ कि ? भन्ने आशामा त्यही ब्यापार कुरेर बसिरहेका छौ ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजना अन्तरगत निर्माण भैरहेको बिधुत गृह कटाक्षे बजारबाट करिब एक किलोमीटर टाढा छ । त्यस्तै सती भन्सार देखि चिसापानी हुँदै सुर्खेत अछाम जोड्ने सडक निर्माण हुन सके बजारको चहलपहल बढ्न सक्ने भाटले बताउनुभयो । कटाक्षे बजारमै रहेको प्रहरी चौकी बजार बिस्थापित भएसँगै लम्की सरेको छ भने त्यही भएको हुलाक कार्यालय जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. ८ को पथरैयामा सरेको छ । त्यसबेला स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा पनि अहिले लम्की स्थानान्तरण भएको स्थानीयव्यापारीहरु बताउँछन् ।
२०४७ सालदेखि किराना व्यवसाय गर्दै आएका सूर्यप्रसाद शर्मा भने उधारोकै कारण त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “२०४७ मा मैले व्यवसाय सुरु गरेँ । २०५० मा बजार खाली हुन थाल्यो ।’ शर्माले भन्नुभयो, “बजार खाली हुँदा मेरो एक लाखजति उधारो उठ्न बाँकी थियो । त्यही उधारो उठाउने आशमा बसियो । अहिले त्यो उधारो ३० देखि ४० लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । अब उठेर जाने कुनै ठाउँ पनि छैन ।” केही आसहरु जीवितै रहँदा आफूहरु त्यहाँ बस्न बाध्य भएको बताउँदै अब कटाक्षेबाट अन्यत्र सर्ने कुनै योजना नभएको शर्मा बताउनुहुन्छ । त्यहा भएका अधिकांश घरहरु समेत उठिसकेका छन । केहिले सस्तोमा त्यहिका स्थानियलाई घर जग्गा बिक्री पनि गरेका छन । कटाक्षे बजार विस्थापित हुनुको अर्को कारण २०४० सालको बाढी पनि भएको स्थानियको भनाई रहेको छ । २०४० सालको बाढीले केही व्यावसायिहरुलाई बिस्थापित गर्नुका साथै कैयौंका सपनाहरु त्यही बाढिले बगाएर लगेको स्थानिय शर्मा बताउनुहुन्छ ।
त्यहाँ स्थापित भएर बसेकाहरु टीकापुर, लम्की, चिसापानी, नेपाललगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा बसाइ सरी जाँदा अहिले कटाक्षे बजार सुनसान बनेको छ । पहिले त्यहाँ लाखौंको व्यापार गर्ने त्यहाँका व्यापारीहरुलाई अहिले एक गिलास चिया बिक्री गर्न पनि मुस्किल हुने गरेको छ ।कटाक्षे हाटबजारको त्यो बेलाको अबस्थाको बारेमा स्व: गगनसिह थापाको कर्णालीको छेउछाउ र बुद्धिशागरको कर्णाली बुलुजमा उपन्यासमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
फोटो : कटाक्षे बजारमा बजार चलेको बेला निर्माण भएको घर । घरमालिकले आफुलाई चिनाउने ब्यापारी त्यही घर भएको भन्दै अहिले सम्म बिक्री पनि गरेका छैनन भने आफू त्यहाबाट बसाइ सरिसकेका छन ।
PrevPreviousसंसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला
Nextरबिनको तिमिको छायांकन सम्पन्नNext